“Sheekhoow Kitaab Baan Maray Inan Gabadhaan Jaceylkeeda Deyneyn Ayadana Markey Yurub Tagtay Rag Kale Bey Isla soo Sawirtaa Oo Weey…’ Qiso Yaab Leh. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Sheikh Mohamed Idiris Oo aalaaba Xooga saaro inuu qanciyo dhalinyarada soomaaliyeed ee ku maashoobay dhibaatada xiriirka ayaa mar kale soo bandhigay suaal uu soo weeydiiyay wiil soomaaliyeed iyo jawaabtuu siiyay
Wey iiga Baxday!!!
Acw Sheekh Maxamed, Ilaahay dartiis ayaan kuu jeclahay Sheekhow, waxaan rabaa inaad wax iga tiraahdo ama igala taliso arrin murug igu haya. Waxaa jirtey sheekhow gabar aanu is heclayn, oo xiriir fiican kahayn, kuna heshiiney inaan is guursanno, waxaan markaas wada joognaa Africa, gabadhii annagoo sidii guur isugu og, ayaa waxaa usoo baxay buufis wadamada reer galbeedka ah, wexey tiri waan baxayaa, anigana ma bixi karo, waxaan ku heshiiney maadaama aanan is guursan karin, inaan kitaabka gacanta saarno, oo ku dhaaranno, inaanan is illaawin, oo markii noo fududaato aan is guursaneyno in sha Allaah.
Sidii ayey gabadhii ku dhooftay, wexey ka degtey wadan ka mid ah wadanada reer galbeedka, taleefan ayey igula soo hadashay iney nabad tagtay, ka dibna waan is wici jirney oo mar walba wey ila soo hadli jirtey sanadkii u horreeyey.
Laakiin sannad ka dib waxaa dhacay in xiriirkeedi yaraaday, wadankii ay fahamtey, intaa waxaa iiga darnaa iney internetka soo dhigto sawiro iyadoo niman kale la sawiran, markaan kala hadlayna wey igu xanaaqdey wexeyna igu tiri: Nin yohow inna kala daa!
Sheekh gabadhii hadda isma hayno, waxaana hadda laga joogaa markey baxday saddex sano, welina gabadhii waa jeclahay oo qalbigayga wey ka bixi la’dahay, anigana ballantii kama bixin oo ma xumayn iyadaa ballantii ka baxday, waxaa kaloo wel wel igu haya ballantii kitaabka aan maray, dembi miyaa iga soo gaaraya, jacaylkeedase sideen ku illaawi karaa, khayr Allaha ku siiyo, ila tali?
Wcs Adeer Ilaahay haku jeclaado sidaad dartiis iigu jeclaatay, sabirna Allaha kaa siiyo, gabadha aad ballanteen oo kaaga baxday, wax ka khayr badanna Allaha kuugu beddelo. Arrinkaaga dhawr qodob oo aan horay marar badan u sheegay ayaan kaa oranayaa adiga iyo dhalinyarta kula midka ah Ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo.
Waa midda koowaade saaxiib ballamaha guurka ee dhalinyarta keligood wada galaan iyadoon lagu xoojin doonitaanka dhabta ah ee reerka, ma xoog badna, si fududna wuu ku burburi karaa, sharci ahaanna saamayn ma leh, oo doonitaan ama (khidba) sharciya ma noqdo, sidaa darteed wax badan yaan layska saarin. Hadii gabadha xitaa lasoo dooni lahaa oo la bixin lahaa waxaagu hal bacaad lagu lisay ayey noqon lahayd.
Tan labaad Saaxiib jacaylka halka dhinac ah sidaan marar badan sheegnay mid dheereeya maaha, waayo laba lugood kuma socdo, ee hal lug ayuu ku taaganyahay. Jaanisku hadduu ku dhaafana oohin iyo murugo masoo celiso, ee Ilaahay baa qaddarey ayaa la dhahaa, mid kale oo laga yaabee inuu ka fiicanyahay ayaa la eegtaa. Noloshuna waa waaya aragnimo is daba joogta, dhcda kastaana waa dersi, casharka ayaa laga qaataa, horana waa looga socdaa oo weligaa hal cashar ama hal class lama dul fadhiyo. Gabadha aad jeclaato maalinta aad jacaylka isla shubaalineysaan ayaa la dabraa, hadii kale adiga xarig iyo xero toona kuuguma jirto, waxaad murug isugu dishaana waa gardarro.
Tan saddexaad Saaxiib horaan rag badan ugu iri: gabari haddey galbeed kaa aadey adna aad hartay, saaxiib wax badan ha sugin, cid aan adiga ahayna ha eedin, awal baad shimbaraha hawada duulaya tiri waan ugaarsanayaa! Gabar iskaba daaye kuwa meher ku xiranyahay rag iska soo diray ayaa habaaska la cunsiiyey, hadii run loo hadlana garawsha badan raggaasu heli maayaan..
Saaxiib Ilaahay tala saaro, iney sidaanu kuu roontahayna Rabbaa og, adiga laftaadu hammiga aan runta ahayn ee kugu jirey in gabari kuu soo dacwooto oo ku xambaarato iska illow, hareerahaaga eeg, khayr iyo barwaaqa badan ayaad ku arki doontaa, riziq ka waasacsan iyo gabdha ka qurux iyo diin badanba waad heleysaa inshallah, ilaahayna isku xir oo istikhaarada had iyo goor ha deyn, Wabillaahi Tawfiiq.